Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » ICarnival Corp. ngoku ukuthumela ii-Cruises ezili-110 eJamaica
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umphathiswa Wezokhenketho u-Edmund Bartlett (L) kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba seCarnival Corporation, eyona nkampani inkulu ehlabathini, uArnold Donald wabelana ngomzuzwana kwintlanganiso yabo eMiami, eFlorida ngoLwesibini, nge-28 Septemba 2021.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, utyhile ukuba i-Carnival Corporation, eyona nqanawa inkulu ehlabathini, izibophelele ekuthumeleni iinqwelo-moya ezili-110 nangaphezulu, ngeemveliso zazo ezahlukahlukeneyo, kwisiqithi phakathi ko-Okthobha u-2021 no-Epreli 2022. Isivumelwano sixhomekeke kwabasemagunyeni baseJamaican naseCarnival sebenza ngokusondeleyo kumalungiselelo kunye nemicimbi yezempilo yoluntu.
I-Carnival liqabane elibalulekileyo kukhenketho lwaseJamaica kunye nokubuyiselwa ngokubanzi kwezoqoqosho.
Iipaseji eziQinisekayo zaseJamaica zibonelela ngendawo ekhuselekileyo yeendwendwe, abasebenzi bezokhenketho, kunye noluntu ngokubanzi.
Intlanganiso kunye neCarnival iyinxalenye yoluhlu lothethathethwano neengcali zeshishini lokuhamba kwiimarike eziphambili zaseJamaica, eUnited States naseCanada, kubandakanya neenqwelomoya ezinkulu kunye nabatyali mali.
Oku kubhengezwe ngu-Arnold Donald, i-CEO ye-Carnival Corporation, kwintlanganiso ebibanjwe ngoLwesibini, umhla we-28 kweyoMsintsi, ngo-2021, noMphathiswa uBartlett, amagosa ezokhenketho asekuhlaleni, kunye nabanye abaphathi abaphezulu beCarnival Corporation.
“ICarnival liqabane elibalulekileyo Ukhenketho lwaseJamaica kunye nokubuyiselwa koqoqosho ngokubanzi. Sibona ukubuyiswa kweenqanawa ngokwamkela ukuba iiNdawo eziQinisekileyo zeJamaica zinika indawo ekhuselekileyo kubakhenkethi bethu, abasebenzi bezokhenketho, kunye noluntu ngokubanzi, ”utshilo uMphathiswa uBartlett.
Isibhengezo siza ngaphandle kokucothisa imfuno yokuhamba ebangelwe kukusasazeka kwe-Delta eyahlukileyo ye-COVID-19 kunye nemicimbi ehambelana nayo.
Umphathiswa Wezokhenketho, Mhlonishwa. U-Edmund Bartlett (4 L) kunye neGosa eliyiNtloko lesiGqeba seCarnival Corporation, eyona nkampani inkulu ehlabathini, uArnold Donald (4 ukusuka ku-R) uthathe umzuzu okhawulezayo wokuthatha iifoto emva kwentlanganiso eMiami, eFlorida ukuxoxa ngokuzibophelela kwabo eJamaica. Ukuzimanya nabo basuka eL - R nguMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; Usihlalo we-JTB, uJohn Lynch; I-Carnival Corporation uSekela Mongameli weePorts zeHlabathi kunye noBudlelwane boRhulumente bakaCaribbean, uMarie McKenzie; UMcebisi oMkhulu kunye neQhinga kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright; IGosa eliyiNtloko lokuSebenza leCarnival Corporation, uJosh Weinstein kunye neJTB uSekela Mlawuli weMelika, uDonnie Dawson.
Intlanganiso kunye neCarnival iyinxalenye yoluhlu lothethathethwano neengcali zeshishini lokuhamba kwiimarike eziphambili zaseJamaica, eUnited States naseCanada, kubandakanya neenqwelomoya ezinkulu kunye nabatyali mali. Oku kwenzelwa ukukhuthaza abantu abaninzi ukuba batyelele indawo ekuyiwa kuyo kwezi veki neenyanga zizayo, kunye nokukhuthaza utyalomali olongezelelekileyo kushishino lokhenketho lwasekhaya.
UBartlett wajoyina uSihlalo weBhodi yezoKhenketho yaseJamaica (JTB), uJohn Lynch; UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; IQhinga eliPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright kunye noSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika, uDonnie Dawson.
Icandelo lokuhamba ngenqanawa yenye yezona zinto zibethwe kakhulu sisibetho se-COVID-19, esinyanzele ukuba sivalwe ngaphezulu konyaka. Nangona kunjalo, icandelo liqhubekile ngokuqhubekeka nokusebenza kwiindawo ezininzi, kubandakanya neJamaica, ngenxa yemithetho engqongqo yezempilo kunye nezokhuseleko, ezinje ngokugonya abagibeli kunye nabasebenzi.
“Ngokubuya kweendwendwe ezimileyo ukususela ngeJuni 2020, besikubona ukukhula okuzinzileyo ukuya kwinqanaba le-COVID-19 kwaye ngoku ukuhamba ngolwandle kubuyile, sijonge phambili ekukhuleni okubonakalayo kumanani ethu. Zonke iimfuno zibekiwe ukuze kuhlangatyezwane ne-United States ne-Jamaica ze-COVID-19 protocols ukongeza kubagibeli abanqunyelwe ekuhambeni ngaphakathi kwiRelior Corridors, utshilo uMphathiswa uBartlett.
“Ndimele ndigxininise ukuba iinqanawa zokuhamba ngenqanawa kufuneka zihlangabezane nemilinganiselo engqongqo elawula ukuqala kwakhona kokuhamba ngenqanawa, ndifuna ukuba abakhweli abangaphezulu kweminyaka eli-12 kunye nabasebenzi bagonywe ngokupheleleyo kwaye bonke abakhweli banike ubungqina beziphumo ezibi kuvavanyo lwe-COVID-19 olwenziwe ngaphakathi Iiyure ezingama-72 zokuhamba ngenqanawa. Kwimeko yabakhweli abangagonywanga, njengabantwana, kuvavanywa i-PCR, kwaye bonke abakhweli bayavavanywa kwaye bavavanywe (i-antigen) ekuqaleni, ”ucacisile uMphathiswa uBartlett.